Analysis Splashdrone 3+ ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် SwellPro ၏ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် | Gadget သတင်း
Miguel Gaton | | မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ
ယနေ့တွင်သင့်အားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုသင့်အား Actualidad Gadget သို့ယူဆောင်လာပါမည် Splashdrone 3+ ကို SwellPro မှအသုံးပြုသည်ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အခြေအနေတွင်ပျံသန်းနိုင်သည့်ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များကြောင့်ရေအားကစားများ၊ ကမ်းခြေတစ်ခုသို့မဟုတ်ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်လက်ထောက်အဖြစ်ပင်လေ့ကျင့်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းအရွယ်အစားရှိပစ္စည်းအတွက် modular ကျစ်လစ်၊ တင်းကျပ်ပြီးအတော်လေးပေါ့သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အထူးသဖြင့်လိမ္မော်ရောင်အရောင်နှင့်အမှန်ပင်ရိုးရှင်းသောမောင်းနှင်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်း၏အခြေခံစျေးနှုန်း $ 1.200 နှင့်ဖြစ်ပါတယ် သင်က link ကနေတိုက်ရိုက်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ် Splashdrone 3+ ။
2 Splashdrone 3+ ကိုစုစည်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
3 Splashdrone 3+ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
5 Splashdrone 3+ ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
7 Splashdrone 3+ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်
9 Splashdrone 3+ ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဗီဒီယို
11 အကောင်းအဆိုး cons
သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတွေ့သောအခါသင့်ကိုထိုးနှက်သောပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာ၎င်း၏အိမ်သည်ရေစိုခံပြီးဖြစ်သည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏အရေးကြီးသောဒြပ်စင်အားလုံးကိုကာကွယ်ပေးသည် တင်းကျပ်စွာတစ်အတော်လေးမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူ။ အဝတ်မခြုံဘဲကျန်ရှိနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာမော်တာများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဆားငန်ရေမှကာကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်နှင့်အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်စက်သည်ဆင်းသက်ရန်၊ ပြmajorနာမရှိဘဲရေမှဖယ်ထုတ်ရန်၊ စိုစွတ်ရန်၊
ဤထူးခြားချက်များကြောင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ရေအားကစား၊ ငါးဖမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကင်မရာဘေးတွင်ပါရှိသောချိတ်နောက်မှတွေ့ရလိမ့်မည်။
Splashdrone3ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ ကောင်းပြီ သင်ဤတွင်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရနိုင်သည်
Splashdrone 3+ ကိုစုစည်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
Splashdrone 3+ ၏တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပျံသန်းရန်အဆင်သင့်ရှိနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက -
ဆင်းသက်ဂီယာ mount အရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်းထဲသို့ဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုကာဗွန်ပြွန်၏တက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူထည့်သွင်းရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ဝက်တစ်ပိုင်းကိုထည့်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုဖြည့်ပါ။ နှစ်ဖက်လုံးကိုအဆုံးအထိထည့်သည်အထိညင်ညင်သာသာနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးဆင်းသက်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစွာပြည့်စုံစေသည်။
အဆိုပါပန်ကာထားပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် propellers များကိုအနည်းငယ်အောက်သို့ နှိပ်၍ rotors ပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသည့်လက္ခဏာများအတိုင်းအနည်းငယ်လှည့်ရန်လိုအပ်သည်။
ဖို့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ထိပ်အဖုံးဖွင့်လှစ် ဘက်ထရီကိုအတွင်းပိုင်းထားပါ။ ၎င်းကိုအပြည့်အဝကိုင်ထားနိုင်စေရန်နှင့်လေယာဉ်ပျံသန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားရွေ့လျားခြင်းနှင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းမှသေးငယ်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
4k ကင်မရာနှင့်အတူ gimbal ထားပါ။ ၎င်း၏နေရာချထားမှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်လျှင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလဲလှယ်နိုင်အောင်၎င်းကိုသူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာတွင်ချိတ်။ pin ဖြင့်လုံခြုံစေရုံသာဖြစ်သည်။
ထိုအချက်မှာဤရိုးရှင်းသောအဆင့် ၄ ဆင့်ကိုလိုက်နာ။ ကျွန်ုပ်တို့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်အာမခံချက်များအားလုံးနှင့်အတူပျံသန်းရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
Splashdrone 3+ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုခိုင်မာတောင့်တင်း။ လှပသောဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့်တင်ပြသည်။ SwellPro အွန်လိုင်းစတိုးတွင်မတူညီသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကင်မရာအမျိုးအစားများကိုသင်တွေ့နိုင်သည် Splashdrone 3+ နဲ့သုံးနိုင်တယ်။ သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်း၊ လှေစီးခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကိစ္စတွင် ကျနော်တို့ရှာဖွေရေး & ကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာအစုံစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည် တစ် ဦး ပါဝင်သည်သော payload-3 module တစ်ခုနှင့်အတူကြွလာ 4k ကင်မရာတစ်ခုတည်းဝင်ရိုး gimbal ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် နှင့်လည်းတစ် ဦး တို့ပါဝင်သည် သေးငယ်တဲ့ပစ်လွှတ် device ကို သငျသညျလေထုထဲကနေအရာဝတ္ထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖြန့်ချိနိုင်သည့်နှင့်အတူချိတ်၏ပုံစံ၌တည်၏။ မဟုတ်ပါကအခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကေဘယ်ကြိုးများသည်ရေစိုခံပါသည်။
လွှတ်ပေးရန်အတွက်စျေးနှုန်းမှာ 4K ကင်မရာနှင့် 1 axis gimbal တို့ပါရှိသည် $ 329 ဖြစ်ပါတယ် y သင်ဒီမှာကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဝယ်နိုင်သည်.
Splashdrone 3+ သည်ကလာသည် ၅ လက်မအရောင် LCD မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ergonomic transmitter ဖြစ်သည် မောင်းသူမဲ့ကင်မရာကိုမြင်နိုင်ရန်နှင့်၎င်းသည်လေယာဉ်ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းလိုအပ်သောအခြေခံဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပေးသည်။ ဥပမာ - ကိရိယာ၏အမြန်နှုန်း၊ အမြင့်၊ အကွံ၊ ဘက်ထရီအားသွင်းမှု၊ ကင်မရာ၏ resolution၊ ပျံသန်းချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့စသည်တို့
ဒီဘူတာရုံကတဆင့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏လေယာဉ်နှစ် ဦး စလုံးထိန်းချုပ်ပါ ကင်မရာမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ဝန်ကိုလွှတ်ရန်ချိတ်ကိုဖွင့်ခြင်း၊ အိမ်ပြန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းစသဖြင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ။
ငါတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုမှာငါတို့မှာလည်းရှိတယ် FPV မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်ပြီးအတူတူပင်ဒီကဗျာလိမ္မော်ရောင်အရောင်လာရသောပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လေယာဉ်ခရီးစဉ်သည်။ ဤမျက်မှန်များသည် FPV မောင်းနှင်မှု၏ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုကိုရရှိစေမည့်မြင့်မားသော resolution နှစ်ဆ LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ FPV မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးကာမျက်မှန်တပ်ရန်အတွက်ကုန်ကျငွေမှာ ၁၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည် သူတို့ကိုဒီ link ကနေရနိုင်တယ်.
Splashdrone 3+ ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
GPS စနစ်ဤနည်းလမ်းသည်ပုံမှန်ပျံသန်းမှုစနစ်ဖြစ်ပြီး GPS ၏အကူအညီဖြင့်တည်ငြိမ်သောပျံသန်းမှုကိုခံစားနိုင်သည်။
ခရုဇ် mode: ဤစနစ်ဖြင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလက်တစ်ချောင်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိရိယာသည်အစဉ်အမြဲတည်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့် jostick အားဖြင့်သင်က၎င်းကိုအလျားလိုက်အလျားလိုက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားစွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုများ။
ATTI mode: ၎င်းသည်သွက်လက်သော mode ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုမြန်ဆန်သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုရောက်ရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မတော်တဆမှုများတွင်လည်းအများဆုံးကျရောက်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် Splashdrone 3+ တွင်အထူးပျံသန်းမှုစနစ်ဟုခေါ်သည် ချောမွေ့ + အရာမှတဆင့် ကျနော်တို့နှစ်ခု potentiometers နှင့်အတူလေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ် jostick အောက်တွင်ရှိပြီး၎င်းသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏လည်ပတ်မှုနှင့် ဦး တည်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်တိကျသောပျံသန်းမှုနှင့်အလွန်တည်ငြိမ်သောဗွီဒီယိုများကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာများကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်သူများအားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ခွင့်ပြုသည် တစ် ဦး GroundStation link ကိုထည့်ပါ သင့်စမတ်ဖုန်းမှကိရိယာကိုထိန်းချုပ်ရန်။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းမှာ ၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။မင်းဒီကနေဝယ်နိုင်တယ်) နှင့်သင်လျှောက်လွှာကိုကျေးဇူးတင်ခွင့်ပြုပါတယ် Swellpro ယင်ကောင် အမျိုးမျိုးသောအသိဉာဏ်ရှိသောပျံသန်းမှုပုံစံများကိုအသုံးပြုပါ။ 'Follow me' function၊ မြေပုံပေါ်တွင်ညွှန်ပြသည့်နေရာသို့အလိုအလျောက်ပျံသန်းသွားမည်၊ အချက်တစ်ချောင်းကိုဝိုင်းပါ။
ဒီမှာငါတို့ကိုမင်းတို့ကမ်းလှမ်းတယ် Splashdrone 3+ ၏ဓာတ်ပုံများ၊ ၎င်း၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် FPV မျက်မှန်များတပ်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူပြခန်း.
Splashdrone 3+ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်
Splashdrone 3+ ရေစိုခံ modular မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည် အလွန်ကြီးစွာသောဝယ်ယူ option ကို တစ် ဦး ရှာနေသူအပေါငျးတို့အဘို့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးရေစိုခံနိုင်သည်။ ၎င်း၏ modular ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားသည်၎င်းကိရိယာအားလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ခွင့်ပြုပေးသည်။
သငျသညျစိတ်ဝင်စားလျှင် ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုဝယ်ကြလော့ ငါတို့နှင့်အတူဤဆောင်းပါး၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းအားလုံးအောက်ပါလင့်ခ်များမှတဆင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။
Splashdrone 3+ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုဝယ်ပါ
တစ်ခုတည်းဝင်ရိုး gimbal နှင့်အတူ 4k ကင်မရာကိုဝယ်ပါ
FPV မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး - S3 ကိုဝယ်ပါ
Splashdrone 3+ ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဗီဒီယို
ထိုအခါသင်သည်တတ်နိုင် Splashdrone 3+ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလှုပ်ရှားမှုတွင်ကြည့်ပါ အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ » Analysis Splashdrone 3+ ကိုစပိန်ဘာသာ၊ SwellPro ၏ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်သည်